सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सार्न खोज्योः नेता नेम्वाङ « Light Nepal
सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सार्न खोज्योः नेता नेम्वाङ
Published On : 13 January, 2018 6:36 pm
काठमाडौँ, २९ पुस – नेकपा (एमाले) का नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सार्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
दोलखा–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचित सांसदलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम नतोक्नुले सरकार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सार्न खोजेको आशंका उत्पन्न भएको बताउनु भयो ।
“सरकारले षडयन्त्रमूलक ढंगबाट निर्वाचन सार्न खोजेको छ”–उहाँले भन्नुभयो, “होइन भने सरकारले यथाशीघ्र प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकोस् ।” उहाँले सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन समयमा नगराएर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन चाहेको धारणासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउँदा पनि वर्तमान सरकारले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेको गुनासो गर्नुभयो । पूर्वसभामुख नेम्वाङले व्यवहारमा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक भइसकेको भन्दै अब सैद्धान्तिक हिसाबले मात्र एक हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैंककबाट फर्किसकेपछि पार्टी एकतालाई मूर्तरुप दिने बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रतिस्पर्धा सकिएकाले अब समृद्धिको बाटोमा लाग्नुको विकल्प नभएको पनि बताउनुभयो ।
सो अवसरमा दोलखाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वत गुरुङ र प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईँ र विशाल खड्काले दोलखाको विकासमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
विष्णु पौडेलको आयो फेरी अर्काे स्पष्टिकरण: ‘नवलपरासीको जग्गा बेचेर बालुवाटार किनेको हुँ’
काठमाडौं, ६ वैशाख । नेकपा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले वालुवाटार जग्गा सम्बन्धि विवादमा फेरी स्पष्टिकरण दिएका
प्रधानमन्त्री भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणमा जाने
काठमाडौं, ६ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणमा जाने भएका छन्
किन फितलो बन्दैछ सम्बन्ध ? बाँकेमा सम्बन्धविच्छेदको डरलाग्दो तथ्याकं
रुपा गहतराज नेपालगंज ६ बैशाख । गत भदौदेखि नयाँ मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ लागु
विप्लवका नेतालाई छोड्न अदालतको आदेश
काठमाडौं, ६ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका काठमाडौं उपत्यका
छोराको बाबु बने आर्यन सिग्देल
विष्णु पौडेलको आयो फेरी अर्काे स्पष्टिकरण:
किन फितलो बन्दैछ सम्बन्ध ? बाँकेमा